Yam, Izibonelelo kunye nendlela yokuyisebenzisa Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
I-Yam sisifo esifubeni esifumaneka kumazantsi mpuma nakumantla mpuma eBrazil. Igama linikwa ii-rhizomes ezingaphezu kwe-600 zeentlobo zohlobo lweDioscorea, ezazifudula zibizwa ngokuba ziicará kwezinye iindawo zelizwe. Kodwa kuphela ziindidi ezili-14 ezisetyenziswayo njengokutya.
Zizondlo ezininzi zempilo, ukongeza kwisalathiso esisezantsi se-glycemic, phantse uncedo olongezelelekileyo kwabo bafuna ukunciphisa umzimba. I-Yam ikwangumthombo obalulekileyo weecarbohydrate, kodwa ayinyusi manqanaba eswekile yegazi kuba iqulethe isixa esikhulu sefayibha.
Isithako sihambile kwaye kukho iindlela ezininzi zokupheka: i-puree, i-tapioca, i-pie, i-gnocchi, isonka, i-pie, isobho kunye nejusi. Beka ubuchule bokusebenza kwaye ubandakanye i-tuber kwisidlo sakho.
1 Iigrama ezili-100 zeemazi ziqulathe:
2 Izibonelelo zam
3 Iiyam ekudleni
4 Ungayisebenzisa njani
Iigrama ezili-100 zeemazi ziqulathe:
Ixabiso lamandla: iikhalori ezingama-406
Amafutha agcwalisiweyo: 0,1g
Amafutha e-Polyunsaturated: 0,1g
Ifayibha yokutya: 1,7g
Iintsinga ezinyibilikayo: 0,1g
Vitamin C: 5,6mg
IPyridoxine B6: 0.1mg
I-Thiamine B1: 0.1mg
I-Yams zityebile kwi-monounsaturated fatty acids, ezibalulekileyo ekunciphiseni i-cholesterol ye-LDL. Ukongeza, inezixa ezilungileyo zevithamini C kunye neevithamini B (thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, pyridoxine kunye ne-folic acid), enegalelo ekusebenzeni komzimba nakwisistim somzimba. Ngokubhekisele kwizimbiwa, ine-potassium, i-iron, i-calcium, i-phosphorus, i-magnesium kunye ne-copper.
Inceda ukulawula uxinzelelo lwegazi;
Inceda izihlunu ziphumle;
Igalelo kwimveliso ye-serotonin;
Uthintelo lomhlaza ngokuba nezixa ezilungileyo zevithamini A no-C;
Ngenxa yokuba isityebi kwifayibha, i-yam ithathwa njenge-carbohydrate ephantsi ye-glycemic. Oko kukuthi, zikhutshwa kancinci kancinci kwigazi kwaye zithintela ii-spikes kwiglucose yegazi. Ngenxa yoko, i-insulin iveliswa ngexabiso elincinci ukuthintela ukufumba kwamafutha esiswini. Ukongeza kuthintelo indlala, ikwaxhasa imvakalelo yokuhlutha.
Eyona nto ilungileyo kukutya i-yam ebilisiweyo, eyosiweyo okanye ene-steamed, engaze iluhlaza. Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba, nangona isempilweni, i-tuber ngumthombo weecarbohydrate kwaye inokuba ikhalori. Inani elicetyiswayo lisebenza kuphela ngosuku.
Abafazi abakhulelweyo nabancancisayo kufuneka bakuphephe ukusetyenziswa.